Myanmar Plaza ကိစ္စနဲ့ပါသတ်ပြီး မင်းသား ဇာဏ်ခီ ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ စာတိုလေးတစ်ကြောင်း – Cele Snap
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ သက်တမ်းနုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကို ထိရောက်စွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာကတော့ ခီမောင်နှံတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ခရစ်စတီးနားခီကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို မင်းသားတင်ရိုက်ပြီး ကိုယ်တိုင်က ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ခရစ်စတီးနားခီနဲ့ ဇာဏ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့
ရုပ်ရှင်ကား အနည်းငယ်နဲ့တင် မတူကွဲပြားစွာ ထိုးမြောက်နိုင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို စောင့်မျှော်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ မိသားစုဟာ အာရှနိုင်ငံတခုမှာေ ရာက်ရှိနေပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဇဏ်ခီကတော့ ထိန်းသိမ်းခံရချိန် ကာလတုန်းက ဆေးကုသခွင့် မရတဲ့သူ့ရဲ့
နဂိုရောဂါအခံဖြစ်တဲ့ အရိုးအကြောရောဂါကပိုမိုဆိုးရွားခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိမှာ အခုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဇာ တ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဘဲ Instagramတွေမှာပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ
တင်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ မြန်မာပလာဇာနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ရပ်တည်ချက်ကတော့ ကုန်တိုက် တစ်ခုလုံးကို တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရတဲ့အထိ တုန့်ပြန်ချက်တွေ ပြင်းထန်လှပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဇာဏ်ခီက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ မြန်မာပလာဇာရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့အတူ ပြည်သူလူထုရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ရေးသားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်ေ နာ်..
မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကမှာ သကျတမျးနုပွီးတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျထဲကို ထိရောကျစှာဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့တာကတော့ ခီမောငျနှံတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ…. ခရဈစတီးနားခီကတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူကို မငျးသားတငျရိုကျပွီး ကိုယျတိုငျက ဒါရိုကျတာလုပျပွီး ထကျမွကျတဲ့ အိမျရှငျမကောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ. ခရဈစတီးနားခီနဲ့ ဇာဏျခီတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့
ရုပျရှငျကား အနညျးငယျနဲ့တငျ မတူကှဲပွားစှာ ထိုးမွောကျနိုငျတာကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ ရုပျရှငျကားတှကေို စောငျ့မြှျောနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။လကျရှိမှာတော့ သူတို့ မိသားစုဟာ အာရှနိုငျငံတခုမှာေ ရာကျရှိနပေါတယျ။ သရုပျဆောငျဇဏျခီကတော့ ထိနျးသိမျးခံရခြိနျ ကာလတုနျးက ဆေးကုသခှငျ့ မရတဲ့သူ့ရဲ့
နဂိုရောဂါအခံဖွဈတဲ့ အရိုးအကွောရောဂါကပိုမိုဆိုးရှားခဲ့တာကွောငျ့ လကျရှိမှာ အခုရောကျရှိနတေဲ့နိုငျငံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနရေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဇာ တျခီတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံစံလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့အဆကျအသှယျမပွတျစဘေဲ Instagramတှမှောပုံတှေ ဗီဒီယိုတှေ
တငျပေးနကွေဖွဈပါတယျ။ မနကေ့တော့ မွနျမာပလာဇာနဲ့ပကျသကျပွီး ပွညျသူလူထုရဲ့ရပျတညျခကျြကတော့ ကုနျတိုကျ တဈခုလုံးကို တိတျဆိတျသှားခဲ့ရတဲ့အထိ တုနျ့ပွနျခကျြတှေ ပွငျးထနျလှပါတယျနျော.. ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ဇာဏျခီက တိတျဆိတျနတေဲ့ မွနျမာပလာဇာရဲ့ ဓါတျပုံလေးတဈပုံနဲ့အတူ ပွညျသူလူထုရဲ့ ရပျတညျခကျြဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျလေးနဲ့ ရေးသားလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျေ နျာ..
သားဦးရတနာလေးဖြစ်တဲ့ Everest ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးတွေကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူးထားတဲ့ အောန်ဆိုင်းရဲ့ခင်ပွန်း